रविना बादीको फेरियो जिवन, भइन् सार्वजनिक – All top Here
Home/भिडियो/रविना बादीको फेरियो जिवन, भइन् सार्वजनिक
रविना बादीको फेरियो जिवन, भइन् सार्वजनिक
काठमाडौं । केही समय अगाडि पारिवारिक सम्बन्धको विषयले सामाजिक सञ्जालमा निकै भा इरल बनेकी रविना बादी यतिखेर भने भूमिगत जस्तै छन् । बादी एक समय सहाराविहीन बनेकी थिइन् । बेसहारा बनेकी उनलाई मानव आश्रम सेवाले बासस्थान दिएको थियो । पटक पटक आफ्नो श्रीमानका बिषयले सामाजिक संजालमा चर्चमा आएकी रविना यति बेला भने एउटा लाइभ भिडियोले गर्दा चर्चामा आएकी थिइन् ।
केहि समय अघि उनले सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत कसैले उनलाई धो का दिएको भन्दै देह त्या ग गर्न लागेको भिडियो सामाजिक संजालमा सार्वजनिक भएको छ । उनले देह त्या ग गर्न लागेको भिडियो सामाजिक संजाल देखि युटूवहरु तिर भाइरल बनेपछि उनलाई थप वि वादमा ल्याएको थियो ।
भारतमा रहेकी रविनाले कुनै भारतीय एक युवकले धो का दिएको भन्दै उनले नामै तोकेर केहि ब्याक्तिको नाम लिदै देह त्या ग गर्न लागेको भिडियो सामाजिक संजालमा सार्वजनिक गरेपछि नेपालीहरु अचम्मित हुन् पुगेका थिए । भिडियोमा उनलाई कसैले पि डा दिएको भन्दै एकएक नाम लिएर आफ्नो घां टीमा सलको पा’सो लगाउदै गरेको भिडियो सार्वजनिक गरेपछि उनलाई सामाजिक संजालमा माया होइन गा लीको बर्षा नै परेको थियो । भिडियोमा उनले सलको पा’सो लगाउदै उनले या तना दिएका केहि पुरुष र महिलाको नाम लिएकी थिइन् ।
तर फेरी रविना एउटा अर्को भिडियोमा अन्तर्वार्ता दिदै गरेको भिडियो आएपछि यसमा पनि झन् उनलाई माया गर्ने शुभचिन्तकहरु रि साएका छन् । भारतीय एक युवकसंग आफ्नो प्रेमी हो भन्दै उनले एउटा युटुवलाइ दिएको अन्तर्वार्तामा देखाएकी छन् । बेला बेला बिभिन्न कारणले वि वादमा आउदा र उनको पुर्व पतिसंग को छोरा बिरामी भएको र आफु बि क्षिप्त भएको भन्दै सामाजिक संजालमा रु दै आएपछि देश विदेशबाट नेपलिहरुले उनलाई सहयोग पनि गरेका थिए । देश बिदेशमा रहेका नेपालीहरुको सहयोगले उनले आफ्नो छोराको उपचार गरेकी थिइन् अहिले तिनै सहयोग गर्ने नेपालीले रविनाको पछिल्लो समयको हर्कत देखेर निकै आ क्रोशित हुन् पुगेका छन । भिडियो हेर्नुहोस…
तिन करोड नेपालीको जित ! गरिब दुखिको भगवान रबि लामिछानेले ! सफाई पाए लगतै यस्तो भने-
वर्तमान सरकारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरिन सक्छन्
हलेसी दर्शन पछि काठमाडौ फर्किदै गर्दा परिवार नै सखाप
श्रीमानले सुत्केरी अबस्थामै छाडेपछि खोले खुवाएर पालेको छोराको १४ बर्षको उमेरमा यो हालत,आमा रुदै भन्छिन ‘अब मलाइ कसले पाल्छ’